Foamfụfụ mmiri: otu o si akpụ na gịnị kpatara ya ji apụta | Netwọk Mgbasa Ozi
N’ezie karịa oge ị garuru n’ụsọ osimiri wee kirie ebili mmiri. You chọpụtala na enwere mgbe ụfọdụ Oke mmiri karịa nkịtị na mgbe ụfọdụ ọ bụghị. Kedu ihe nke a bụ? Mgbe ụfọdụ enwere ike na ọtụtụ ihe jikọtara ọnụ nwere ike ime ka ebili mmiri ahụ rute n'ikpere mmiri na ụfụfụ, ebe oge ndị ọzọ enwere oke ụfụfụ nke na ọ dị ka mmiri dị na igwe ịsa ahụ.
N’isiokwu a anyị ga-akọwara gị ihe bụ ihe na - eme ka ụfụfụ oke mmiri baa ụba ma ọ bụ na - enweghị.
1 Oke mmiri na ihe
2 Anecdote nke ụbọchị na-egbukepụ egbukepụ
3 Ihe ndị ọzọ na-etolite ụfụfụ oké osimiri
4 Okwu taa
Oke mmiri na ihe
Meerschaum yiri nke bekee. N’ezie ị nụla ihe karịrị otu ugboro na mgbe mmiri na-ama ụfụfụ, ọ na-eru unyi. Nke a bụkwa ihe a na-anụkarị ma ọ bụ ihe metụtara ya. Enweghị nnukwu ọdịiche dị na ngwakọta nke mmiri mmiri dị iche iche na anyị nọ n'ime oké osimiri na oké osimiri. Ya mere, ụfụfụ ahụ nwere ihe ọzọ kpatara ya.
Ndị a bụ ikuku ikuku na-apụta mgbe ikuku na-akpali mmiri. Ọ bụrụ na anyị nwere ọfụma siri ike n'ihi oke ọsọ nke ifufe na-efe, o yikarịrị ka mmiri nwere ọtụtụ ụfụfụ. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na anyị aga n'akụkụ osimiri ma mmiri ahụ dị jụụ, anyị ga-ahụ naanị ụfụfụ mgbe ebili mmiri ahụ dara n'ụsọ osimiri ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele nke a n'ụlọ, naanị gbanye otu iko mmiri na ngaji ị ga-ahụ na ike ị na-ama jijiji, ka ụfụfụ ma ọ bụ afụ ị ga-ahụ. Amfụfụ dị ka ndị dị otú ahụ ị gaghị ahụ ya na mmiri mgbata, ma ị ga-ahụ na-akpali akpali egosipụta.
Na-eme ka okpomọkụ nke oké osimiri dịkwuo ala, ọ ga-agbatịkwu ụfụfụ ahụ. Ọ bụghị ihe bụ isi, ebe ọ bụ na ọ dabere n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ, mana ị nwere ike nweta echiche banyere etu mmiri ga-esi dabere na ụfụfụ o nwere. Nke a bụ n'ihi na gas anaghị agbaba na mbara igwe n'otu ụzọ ma ọ bụ jiri oke ọsọ ọsọ dị ka mgbe anwụ na-acha.
Anecdote nke ụbọchị na-egbukepụ egbukepụ
N'ihi nke a anyị kwurula banyere ọnọdụ okpomọkụ, enwere ihe ndekọ mere na 2014 n'ụbọchị nlọghachi na Galicia. Ebili mmiri ahụ ruru elu nke ihe dị ka mita 10 n'ịdị elu, ya mere ifufe nke na-efesi ya mere ka ọ sie ezigbo ike. Ihe dị otu a bụ na ebili mmiri siri ike, oke osimiri siri ike yana ọnọdụ ya adịchaghị ala, na ọnụego ụfụfụ mmiri nke ewepụtara nwere ọtụtụ iri kilomita.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ụfụfụ, ihe omume a mepụtara ọdịda anyanwụ mara mma ma bụrụ ihe omume mara mma. Ọ bụrụ na ọ bụ na ọnọdụ ikuku dị elu karịa elu, nke a agaraghị eme, ebe ọ bụ na ikuku ndị mejupụtara afụ ahụ gaara abanye na mbara igwe n'oge gara aga n'ihi ọrụ nke okpomọkụ. Ka anyị ghara ichefu na ikuku na-ekpo ọkụ dị ntakịrị karịa, ya mere ọ na-ebili ma ikuku dị jụụ dochie ya.
Ihe ndị ọzọ na-etolite ụfụfụ oké osimiri
Ihe ọzọ na - eme ka ụfụfụ mmiri pụta bụ na ọ na - emetọ ikuku. Nkwafu ndị ejiri fatịlaịza, nchacha nri, na compost zuru oke maka ịmị ọtụtụ ụfụfụ ma nwee nhụsianya dị ntakịrị karịa ụfụfụ nkịtị. Mgbe mmiri metọrọ emetọ mmiri ọgwụ ndị a site na ebili mmiri, na-ebutekarị ụfụfụ buru ibu. Na oge nke otu, ọzọ na-adabere na gburugburu ebe obibi okpomọkụ, mmiri okpomọkụ na ịta nke mmetọ na oge. Ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ịwụnye efere efere n’ime iko mmiri n’ụlọ ma jiri ngaji tụgharịa. Dabere na ntinye nke igwe eji asacha efere, ọ ga-eme ụfụfụ ma ọ bụ karịa.
N'aka nke ọzọ, ọnụnọ nke ihe mmetọ dị iche iche na mmiri na-eme ka ọtụtụ microorganisms na-eme ka mmiri buru oke ibu. Ka microorganisms na-aba ụba, a na-etinye kemịkal site na metabolism ha. Nke a na - eme ka ụfụfụ dịrị ogologo oge (na - agbanwe ikuku n’elu mmiri). Na mgbakwunye, mgbe kemịkal ndị a gbanwere nguzogide mmiri ahụ nwere na gas anaghị ahapụ akụkụ mmiri mmiri, ọ na-akpata ya enweghi ezigbo oxygenation na gburugburu ebe obibi. Site n’inweghi oxygen dị na mmiri, ọtụtụ ihe dị ndụ bi n’ime ya na-emebi ma mebie.
Ọnọdụ ndị a niile pụtara na, n'ụzọ na-ezighi ezi, usoro okike nke mmiri mebiri kpamkpam. Nke a bụ otú mmetọ na-emetụta mmiri na-adịghị mma.
Ọnọdụ ndị a na-eme ọtụtụ oge na Australia. Mgbe nke a mere, a na-ekpuchi ụsọ osimiri n'ụfụfụfụfụ maka oge ụfọdụ. A na-akpata ụfụfụ a site na oke nsị na organic. Ọ bụrụ na anyị atụnyere ụfụfụ nke ikpe Galician na nke Australia, anyị nwere ike ịhụ na ọdịdị ahụ dị iche. Ọ bụ ezie na nke Galicia dị ka ihe okike, nke dị n’Australia dị ka ụfụfụ site na mgbe anyị lere igwe na-asa akwa mgbe ị na-asa akwa.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, enwere ịnweta n'ụwa nke a maara dị ka ụfụfụ mmiri. Enyere aha a n'ihi ụcha ọcha ya na ọdịdị nke ụfụfụ. N'oge gara aga, a na-eji mineral a maka ịrụ anwụrụ anwụrụ. NkechiỌ bụ ọtụtụ sepiolite na ọ bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na mmanụ agbaba n'oké osimiri. Nke a bụ n'ihi ihe ndị nwere ikike dị ukwuu nke nwere ike idowe ọtụtụ ihe ọ wụfuru wee wepụ ya. Ọ dị ka à ga-asị na anyị ji ogbo mgbe anyị na-awụfu ihe n’ala iji banye mmiri ahụ. Ọ na-enyekwa aka na otu mmanụ ahụ erughị ala ala oké osimiri, na-ebibi ihe ọkụkụ na ụmụ anụmanụ dị ugbu a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụfụfụ oké osimiri nwere mmalite ya na nkọwa ya. N'ụzọ dị otu a, mgbe ọzọ ị gara n'ụsọ osimiri ị ga-ahụ na oke osimiri ahụ nwere ọtụtụ ụfụfụ, ị ga-enyocha ihe kpatara ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke mmiri
Ihe ndị a niile bụ ihe ngọpụ iji mee ndị ndọrọndọrọ ọchịchị obi ụtọ, ebumnuche ndị e zoro aka na ya, ọ bụrụ na ha bụ ihe okike, ha ga-eme mgbe niile: Adị m 73 afọ ma dịka nwata m nọrọ ọnwa 3 ezumike na obere obodo dị na Castellón, agbaala m àmà nnukwu ebili mmiri ma enwere m obi ụtọ na ha n'ụsọ osimiri, mana ahụbeghị m ụfụfụ ụfụ a, naanị ihe gbanwere bụ mmetọ nke oké osimiri, na site na emulsion bụ ihe na-akpata ụfụfụ ahụ, ihe ndị ọzọ bụ ihe na-adịghị mma ma na-adịkarị obere. Agaghị m ekwe ka ụmụ ụmụ m saa ahụ.
Zaghachi Enrique de Costa Ruiz
Bohr atọm nlereanya